နန်းဆိုင်နွမ်| December 3, 2012 | Hits:1
| | မန္တလေးဆေးရုံကြီးတွင် မီးလောင် ဒဏ်ရာဖြင့် ဆေးကုသခံယူနေသည့် မဖြူဖြူဝင်းကို အားပေးရန် မုံရွာမှ အစ်မဖြစ်သူ မသွဲ့သွဲ့ဝင်းနှင့် မအေးနက်တို့ လာရောက် ကြည့်ရှုအားပေးစဉ် (ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ)
ချိန်ကိုက်မိုင်းတွေ ဆက်တိုက်တွေ့နေတဲ့ မြဝတီမြို့ လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ထားမြေမြှုပ်မိုင်း ကွင်းထဲမှာ ရှင်သန်ကြသူများ“မိုင်းက လုံးဝ အဓိပ္ပာယ် မရှိတဲ့ တိုက်ပွဲ တခုပါပဲ”ကယား ဒေသခံများ မြေမြှုပ်မိုင်းဒဏ် ဆက်လက်ခံနေရဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရေး KNU နှင့် ၈၈ ပူးပေါင်းမည်
23 Responses LeaveaReply Cancel reply
Salai Lian December 3, 2012 - 9:51 pm It seems like the government tries to leave its wastes(Poops) everywhere and makes Suu Kyi clean it. I agree with the decision made by the 88 Generation Group. Cover-ups might be at every corner, therefore independent investigators may doabetter job than Thein Sein’s handpick commission.
Reply mm December 4, 2012 - 9:00 pm Watch what you are saying. Daw Su is not stupid. If she has accepted it, she must have the trust in herself that she can resolve it. As for 88 generation, they do have courage to defy the government but i pretty much doubt their ability or willingness to resolve issues especially when there is slight chance of people hating them.
Reply Maung Myo December 3, 2012 - 10:52 pm How 88 generation? You want to do the speaking only.
Reply zaw December 3, 2012 - 10:54 pm Sorry,
Reply Ohn December 3, 2012 - 10:59 pm Aung San Suu Kyi as judge and jury is of such relief to Thein Sein for sure.
Even though 88′s are moving and voicing right move and noise, when the penny drops they WILL side with Thein Sein as usual.
Both Aung San Suu Kyi an 88′s are united with Thein Sein for the Lapadaung to GO AHEAD.
Reply swe htwe December 3, 2012 - 11:49 pm The truth cann’t be hidden. Any people who command to make brutal attack on unarmed people must be punished. Who is responsible for this???
Reply Mon- Kayin December 4, 2012 - 1:01 am လက်ပံတောင်းတောင်ကိစ္စ ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနာဂတ် ဒီမိုကရေစီ
Reply hotladylay December 4, 2012 - 5:41 am အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ အထိကရုံးနှိမ်နင်းရေး ရဲအဖွဲ့ ရက်စက်တဲ့အမှားကိုကျူးလွန်လိုက်ပါပြီ။ညာဖို့ဖုံးကွယ်ဖို့မဖြစ်နိုင်လောက်အောင် ထင်ရှားသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် တဖြေးဖြေး မကျေနပ်မှုကိုဆန္ဒဖေါ်ထုတ်လာတဲ့ တပြည်လုံးက ရဟန်းရှင်လူတွေကို ဥပဒေတွေအမျိုးမျိူး တပ်ပြီးလိုက်ဖမ်းနေမဲ့အစား အမှားကိုဝန်ခံပြီး ကြီးမားတဲ့ လူထုအုံကြွမှုကိုမဖြစ်စေပဲ ပြည်သူလူထုအားလုံးကျေနပ်မဲ့တောင်းပန်မှူနဲ့ လုပ်သင့်တာကိုအမြန်ဆုံးမလုပ်နိုင်ယင်တော့ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကောက်ကွေ့သွားနိုင်တဲ့အပြင် တုံ့ဆိုင်းဆိုင်းဖြစ်နေတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နှက်ကိုင်တွေနဲ့လုပ်မေတဲ့တ၀က်တပြက် Peace Fund Process ပါ ပြက်စီးသွားနိူင်တယ်။
Reply hotladylay December 4, 2012 - 5:42 am အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ အထိကရုံးနှိမ်နင်းရေး ရဲအဖွဲ့ ရက်စက်တဲ့အမှားကိုကျူးလွန်လိုက်ပါပြီ။ညာဖို့ဖုံးကွယ်ဖို့မဖြစ်နိုင်လောက်အောင် ထင်ရှားသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် တဖြေးဖြေး မကျေနပ်မှုကိုဆန္ဒဖေါ်ထုတ်လာတဲ့ တပြည်လုံးက ရဟန်းရှင်လူတွေကို ဥပဒေတွေအမျိုးမျိူး တပ်ပြီးလိုက်ဖမ်းနေမဲ့အစား အမှားကိုဝန်ခံပြီး ကြီးမားတဲ့ လူထုအုံကြွမှုကိုမဖြစ်စေပဲ ပြည်သူလူထုအားလုံးကျေနပ်မဲ့တောင်းပန်မှူနဲ့ လုပ်သင့်တာကိုအမြန်ဆုံးမလုပ်နိုင်ယင်တော့ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကောက်ကွေ့သွားနိုင်တဲ့အပြင် တုံ့ဆိုင်းဆိုင်းဖြစ်နေတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နှက်ကိုင်တွေနဲ့လုပ်နေတဲ့တ၀က်တပြက် Peace Fund Process ပါ ပြက်စီးသွားနိူင်တယ်။
Replyုkumudra December 4, 2012 - 9:00 am ကောင်းတာပေါ့ ၊ ရတိုင်းဆန္ဒတွေပြကြ ၊
Reply zaw December 4, 2012 - 11:29 pm Dear Kumudra,
Reply သာကီသွေး December 4, 2012 - 10:02 am ရက်စက်လိုက်ကြတာ
Reply aung aung December 4, 2012 - 6:00 pm very very like
Reply မိုးအေးအေး December 4, 2012 - 12:30 pm ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသစ်တဲ့…………ခုတိုင်းဆို ဘာထူးတော့မလဲ …။သန်း ၆၀ သောပြည်သူတွေအတွက်တဲ့ သမ္မတသစ်စကား အကြွင်းကတော့ သုံည ဖြစ်သွားပြီစိတ်မကောင်းစရာပဲ
Reply စိမ်း December 4, 2012 - 3:44 pm ၈၈ အနေနဲ့ ဒီကိစ္စကို သူတို့ထိရောက်စွာ ဘယ်လိုလုပ်ပေးနိုင်မလဲ။ အနည်းဆုံး အကြမ်းဖက်မှုကို သူတို့ ဘယ်လိုဖော်ထုတ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမယ်။ ဘာမှ ဖြစ်မလာရင်တော့ ၈၈ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ အကျိုးမရှိတဲ့ အကျိုးယုတ်စေတဲ့ သုံးစားလို့ မရတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်။
Reply U Mg Gyi December 4, 2012 - 6:31 pm 88-Students Leaders-
Reply TMM December 8, 2012 - 12:20 pm right. They were too old to be students even in 88 anyway. They may be communists as they were accused by MIs. U Mg Gyi, you areagenius.
Reply KHINE ZAR THWE December 5, 2012 - 10:37 am ဆန္ဒပြမှုကို ဖြိုခွဲမှုသည် ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကျကျ နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီ အရေးယူ ဖြိုခွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ မျက်ရည်ယိုဗုံးကိုသာ သုံးစွဲခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားပြီး မီးလောင်ဗုံး မသုံးစွဲခဲ့ကြောင်း ကြေညာချက် ထုတ်တယ်ဆိုတော့ မီးလောင်ဒဏ်ရာက တရုပ်ကလုပ်တာပေါ့
Reply May December 5, 2012 - 12:21 pm Ko Min Ko Naing and 88s have already understood what the ending of that commission will be, I think. Everybody who is wise enough to see the foreseeable future can predict what the result of that commission will be.
Reply အစိုးရဝန်ထမ်း December 6, 2012 - 10:46 am အစိုးရဝန်ထမ်းလုပ်လာတာ နှစ်(၂၀)ကျော်ပြီ။ ကောင်းအောင်လုပ်ချင်တဲ့သူ ဆိုတာ အင်မတန်ရှားတယ်။ မတွေ့ဘူးသေးဘူး။ အားလုံး နားလှည့်ပါးရိုက် လုပ်နေကြတယ်။ မခံချင်တာတောင်မှ သားသမီး ထမင်းငတ်သွားမှာစိုးလို့ ငြိမ်ပြီးသည်းခံနေကြတာ လူတိုင်းလိုလိုဆိုတော့ စွန့်လွှတ်စွန့်စား ဆန္ဒပြသူတွေကို လေးစားမိတာတော့ အမှန်ပဲ။ ဌာနကို လူကြီးလာတယ်၊ အားလုံးကောင်းအောင်လုပ်နေကြတယ် ဆိုပြီးလိမ်တယ်။ ပြန်မပြောနဲ့ မင်းမိသားစု ထမင်းငတ်သွားချင်လားဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောတာ။ ဆိုလိုချင်တာက ၈၈ တွေဆုံးဖြတ်ချက်ဟာလည်း နားလှည့်ပါးရိုက်လုပ်နေတဲ့ အစိုးရအတွက်တော့ မှန်ကောင်း မှန်နိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လည်းအားကိုးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိစ္စတော်တော်များများမှာ နားလှည့်ပါးရိုက်လုပ်နေကြတော့။ လက်ပံတောင်က ဘုန်းကြီးတွေ နှိမ်နင်းခံရတာ ဒေါ်ဆောင်ဆန်းစုကြည်လာမယ့်အချိန်နော်…။ ပါးရိုက်ပြီးတော့ နားပြန်လှည့်ပေးလိုက်တယ်။ ဝင်ရောက်ဖြေရှင်းပါတဲ့။ ရှင်းတာကို ရှုပ်အောင်လုပ်နေကြတယ်။ ပါးရိုက်ခံရတဲ့ သူတွေက ဆေးရုံမှာ။ ပါးရိုက်တဲ့သူတွေကိုခေါ်ပြီး စစ်လိုက်ရင် ရှင်းနေတာကို ဘာကြောင့် ကွေ့ပတ်ပြီး သွားနေရတာလဲ။ အဲဒါပြောတာပေါ့။ ၈၈ တွေဆုံးဖြတ်တာ မှန်နိုင်တယ်ဆိုတာ။
Reply ဝန်ထမ်းတစ်ဦး December 6, 2012 - 1:20 pm အစိုးရဝန်ထမ်း ပြောတာနဲနဲလိုနေတယ်
Reply TMM December 8, 2012 - 12:30 pm So why are u still serving the government…. Waiting for your own big time while already corrupted yourself. If u hate the way your superiors do, you can’t survive 20 years. I bet you are already enjoying your fair share of corruption.
Reply mm December 8, 2012 - 10:11 am ဒေါ်စု ပါလို့ လုံလောက်နေရင် သက်သက် ထပ်ပြီး စုံစမ်းစရာ လိုသေးလား ဒါမှမဟုတ် တာဝန်မယူချင်တာလား ၈၈ ကို အများကြီးမျှော် လင့်ခဲ့ မိတယ် ဘေးပြော ပြောမနေပါနဲ့ ကော်မရှင်ထဲဝင်ပါ ပြီးမှမကျေနပ် တာကို အချက်အလက် နဲ့ ပြည် သူ ကို တင်ပြပါ.